आवास र काम Transgender भेदभाव | USAHello | USAHello
अमेरिकामा, त्यहाँ आवास र काम transgender भेदभाव बारेमा नियमहरू छन्. ट्रान्स मानिसहरूले निकाल गर्न सकिन्छ, इन्कार गरे रोजगार, तिनीहरूले ट्रान्स कारण वा आवास टाढा गरिएका. काम र आवास मा transgender सुरक्षा र अधिकार बारे जान्न. कानुनी सल्लाह र सहयोग प्राप्त गर्न जहाँ फेला.
विशिष्ट transgender अधिकार प्रत्येक अवस्थामा भिन्न छन्. तर संयुक्त राज्य अमेरिका भन्दा नै सबै हो भनेर transgender भेदभाव बारेमा केही नियमहरू छन्.
काममा Transgender भेदभाव
तपाईं आफ्नो कर्मचारी वा अन्य कार्यकर्ता द्वारा काम मा छैन परेशान गर्न सकिन्छ. जस्तै:
मान्छे ट्रान्स बारेमा Jokes वा मतलब टिप्पणी गर्न सक्दैन.
मान्छे उद्देश्य मा नाम गलत वा सर्वनाम छैन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ.
मान्छे आफ्नो शरीर वा लिङ्ग बारेमा अशिष्ट प्रश्न गर्न सक्दैन.
तपाईं प्रश्न गर्न वा काममा निकाल. जस्तै:
आफ्नो मालिक आफ्नो लिङ्ग केरकार गर्न सक्दैन.
तपाईं transgender छन् कारणले आफ्नो मालिक तपाईं आगो सक्दैन.
आफ्नो मालिक तपाईं transgender छन् किनभने तपाईं प्रवर्द्धन गर्न इन्कार गर्न सक्दैन.
तपाईं बाथरूम बाट टाढा छैन गरिएका गर्न सकिन्छ. जस्तै:
तपाईंको कार्यस्थल तपाईं चयन बाथरूम प्रयोग गरौं छ.
तपाईंको कार्यस्थल तपाईं बाथरूम उपयोग गर्न तपाईंको लिङ्ग साबित कागजातहरू लागि नसोध्नुहोस् सक्छ.
थप पढ्नुहोस् काममा ट्रान्स अधिकार. कसैले तपाईंलाई विरुद्ध discriminating छ भने, यो तल मा के रहेको छ कसैले लेख्न र भन्न निश्चित. बारेमा थप जान्न तपाईं के गर्न सक्छ यदि यो हुन्छ.
Transgender भेदभाव आवास मा
तपाईं transgender किनभने मानिसहरू त्यागेर सक्दैन.
तपाईं transgender किनभने मानिसहरू बिदा गर्न जबरजस्ती गर्न सक्दैनन्. तपाईं एक पट्टा वा सम्झौता छ भने, यो STA तपाईं लागि कानुनी छ.
तपाईं एक बेघर आश्रय मा रहन आवश्यक छ भने:
किनभने पुरुष र महिला अलग कोठा मा हुन सक्छ मान्छे आफ्नो लिङ्ग सोध्न. तपाईं whichever लिङ्ग तपाईंले पहिचान तिनीहरूलाई बताउन सही छ.
मान्छे आफ्नो लिङ्ग को चिकित्सा प्रमाण माग गर्न सक्दैन.
ट्रान्स मान्छे आफ्नो घर बाहिर बाध्य र बेघर shelters टाढा गरियो. हरेक पाँच transgender मान्छे को एक आफ्नो जीवनमा बेघर कहिलेकाँही छ. आफ्नो निकटतम LGBT समुदाय केन्द्र तपाईं अनलाइन सूचीबद्ध छैन कि एक आश्रय पाउन मदत गर्न सक्छ. यो अली Forney केन्द्र संक्रमणकालीन र आपतकालीन छ धेरै राज्य अमेरिका मा LGBT युवा को लागि आवास.
धेरै कानुनी संगठन अनुभवी transgender भेदभाव भएका मान्छे को लागि अवस्थामा लिनु. त्यहाँ केही कानुनी संगठन हो यो LGBT समुदाय समर्थन गर्न विशेष.
ल्याम्ब्डा कानूनी सबै भन्दा ठूलो राष्ट्रिय LGBT कानुनी सहायता संगठन हो. को ल्याम्ब्डा कानूनी helpdesk आफ्नो मामला समीक्षा र स्थानीय प्रतिनिधिहरु तपाईं जडान गर्न सक्नुहुन्छ.
को ACLU निःशुल्क ग्राहकहरु प्रतिनिधित्व गर्ने एक कानुनी संस्था हो. यो LGBT अधिकार को लागि कार्यक्रम छ र परेशान छन् जो LGBT मान्छे प्रतिनिधित्व. तिमी सक्छौ स्थानीय ACLU संबद्ध फेला हरेक राज्य मा.
Transgender समानता लागि राष्ट्रिय केन्द्र सबै ट्रान्स अधिकार रक्षा गर्न काम गर्दछ. यो भन्दा बढी समर्थन 80 ट्रान्स ग्राहकहरु प्रतिनिधित्व गर्ने संगठनहरू. तिमी सक्छौ चआफ्नो राज्य मा Ind ट्रान्स कानुनी सेवा.
Transgender अधिकार र पहिचान
Transgender reassignment र संक्रमण